Etalọ ahịa azụmaahịa na ịzụ ahịa azụ ahịa nke 2021 | Martech Zone
Ọ bụrụ na e nwere otu ụlọ ọrụ anyị hụrụ na ọ gbanwere nke ukwuu afọ gara aga ọ bụ ụlọ ahịa. Ulo oru n'emeghi uzo ohuru ma obu ihe ndi ozo iji mee ka ndi mmadu mara onwe ha chotara onwe ha na nbibi n'ihi mkpochi na oria ojoo.
Dabere na akụkọ ụlọ ahịa ụlọ ahịa kwụsịrị 11,000 na 2020 na naanị 3,368 ọhụụ ọhụrụ mepere.
Kwuo azụmahịa na ndọrọ ndọrọ ọchịchị
Nke ahụ agbanwebeghị ọchịchọ maka ngwugwu ngwugwu ndị ahịa (Igwe okwu), ọ bụ ezie. Ndị ahịa gara na ntanetị ebe ha zigara ha ngwaahịa ahụ ma ọ bụ ha echekwaara nnara.
RangeMe bụ usoro ntanetị nke na-enyere ndị na-ere ahịa aka ịchọpụta ngwaahịa ndị na-apụta mgbe ha na-enye ndị na-enye ha ikike ijikwa na itolite ụdị ha. Ha mepụtara ozi nkọwa a zuru oke na ngwa ahịa CPG maka afọ 2021.
22021 ga-abụ oge maka azụmaahịa ga-eme n'ọdịnihu gosipụta onwe ha ka anyị na-agagharị na mmetụta nke ọrịa na-efe efe ụwa. Maka ndị na-azụ ahịa, ndị na-ebubata ngwaahịa, na ndị na-ere ahịa, nchọpụta ngwaahịa ọhụụ ga-enwe hyperfocus na ahụike na ahụike ma na-eto eto na ebumnuche di iche iche. A ga-ekwusi ike na ịzụ ahịa dị mma, ime ka ndị obodo nwee ọnụ ahịa, yana ịkwụ ụgwọ.
Top Retail na CPG na-ewu ewu maka 2021
Top Retail nddị
Zụta ihe bara uru - 44% nke ndị na-azụ ahịa na-eme atụmatụ ịbelata ịzụrụ ihe na-adịghị mkpa ka ọnụọgụ enweghị ọrụ na-arị elu.
Buy-Ugbu a-Lezienụ-Emechaa - Enweela 20% mmụba Afọ-Afọ (YoY) maka ịzụrụ ihe ugbu a - ịkwụ ụgwọ $ 24 na ahịa.
Di iche iche - N’oge ọhụụ a nke ndị ahịa maara ihe nke ọma, ụlọ ọrụ ahụ na-arụ ọrụ na iweta ntinye na iche iche na-ebute ụzọ na itinye ngwaahịa ndị pere mpe nwere ihu na etiti.
nkwado - Ndị ahịa na-ahụ maka gburugburu ebe obibi chọrọ ka ụdị belata ngwugwu ha na-eji.
Lọ ahịa Obere, plọ ahịa Obodo - 46% nke ndị na-azụ ahịa nwere ike ịzụ ahịa na mpaghara ma ọ bụ obere azụmaahịa nke ezumike ikpeazụ a karịa ezumike ndị gara aga.
mma - 53% nke ndị na-azụ ahịa na-eme atụmatụ ịzụ ahịa n'ụzọ ndị na-azọpụta ha oge, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ọ bụghị ọnụ ala.
ecommerce - E nwere ịrị elu 44% na ịzụ ahịa n'ịntanetị, okpukpu atọ kwa afọ na-eto eto na United States maka afọ ndị gara aga!
Brick & ngwa agha gbanwere - 44% nke ndị na-ere ahịa 500 kacha elu nwere ụlọ ahịa anụ ahụ na-enye nnara akụkụ, ụgbọ mmiri-na-ụlọ ahịa, na Zụta ọnlaịnụ, Bulie na Storelọ Ahịa (BOPIS)
Ahịa Bezụ Omume Trends
Okomoko na Ihe Ozo - Ahịa okomoko na 2020 mụbara 9% na afọ gara aga ka ndị mmadụ na-arụ ọrụ site n'ụlọ na-ele anya iji meziwanye gburugburu ha ma zọọ onwe ha.
Uche na ahụ nri - 73% nke ndị na-azụ ahịa na-akwado ịkwado ọdịmma ha; 31% nke ịzụta ihe ndị ọzọ ahaziri maka ahụike ha (gụnyere ibu, ahụike uche, ọgụ, wdg)
Gut ike - 25% nke ndị ahịa ụwa na-ata ahụhụ site na nsogbu ahụike gbasara nri. Ndị ahịa na-achọ ngwaahịa na-akwado ya ma na-ezere ngwaahịa na-adịghị.
Uwe agbagha azụ - Dịka ọrịa na-efe efe na-alaghachi, ụlọ ọrụ na-atụ anya uto 30% na ahịa uwe n'afọ a.
Ọganihu nke Osisi - Enwere uzo 231% YoY na Machị nke ngwa ahia ohuru nke sitere na onodu ahuike, nri di iche iche, na inweta ihe.
Mocktails Na Na Na - Nchọpụta Google na-aba n'anya na-abawanye 42%!
Omume havzụ Omume zuru ụwa ọnụ
Ahụike Na-egbochi - 50% nke ndị ahịa China na-eme atụmatụ itinyekwu ego na nlekọta ahụike mgbochi, vitamin na mgbakwunye, na nri ndị na-edozi ahụ.
Na-Ngwaahịas - Enwere 9% uto maka ngwaahịa nnabata nke nri. Dịka ọmụmaatụ, na Vietnam, ụdị mmiri ara ehi na-enweghị mmiri ara ehi dị ka ụdị mmiri ara ehi na-eto eto na-ewu ewu.
Vegan - Ndị ahịa 400,000 ndị Britain gbalịrị nri vegan na 2020! UKlọ ọrụ 600 UK kwalite Vegenụ ma bulie ngwaahịa vegan 1,200 ọhụrụ.
Ntughari ulo - 60% nke ndị na-eri ihe na Spain hụrụ ngwaahịa sitere na Spanish sitere na ngwaahịa dị ka ihe dị mkpa n'ịzụta. Ndị ahịa German mere ka azụrụ ọnọdụ mpaghara maka nkwado na ọrụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
Tags: n'uwebopisAdobe na ngwa aghazụta ego n'ịntanetị na ụlọ ahịanjirimara na-emechi emechiusoro ịzụ ndị ahịangwaahịa ndị a kwakọbara n'ahịaanụ ụlọAhịa na-adịghị n'ịntanetịahia omnichannelngwa ahịa n'ịntanetịmgbochi ọrịana-akwụ ụgwọere ahịaere ahịankwadovegan